Ajọ ifufe, gịnị kpatara eji akpọ ha ya? | Netwọk Mgbasa Ozi
Ajọ ifufe, gịnị kpatara eji akpọ ha ya?
David melguizo | | Ajọ Ifufe
Ajọ ifufe kpara mkpuru ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ United States n’agbata afọ 1950 na 2007
Bọchị ndị a na nsonaazụ nke ajọ ifufe Haiyan o Yolanda (dika amara ya na Philippines) aghaghi ime ka otutu ndi mmadu ghota ebe ndi aha ahu si bia, otu ha si choputa ha na ihe kpatara ya na ufodu, dika nke a, ha nwere ihe kariri otu aha. Fọdụ nwedịrị ike iche, gịnị kpatara oke mmiri ozuzo ma ọ bụ oke mmiri ozuzo nke ha na-emepụta mgbe ụfọdụ aha dị ka nke a ma debe ya mgbe ha ruru oke ifufe ma ọ bụ oke ifufe nke ebe okpomọkụ?
Enyere Typhoons aha dị iche iche n'akụkọ ihe mere eme. Nhazi ha agbanweela kemgbe afọ iji ruo usoro ndepụta nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọrụ ihu igwe ụwa niile (WMO, NHC, PAGASA, wdg).
Ruo ọtụtụ narị afọ, a kpọrọ aha ajọ ifufe aha onye nsọ nke ụbọchị ha mere ("San Felipe" na 1876 Puerto Rico) Na ngwụsị narị afọ nke XNUMX, otu onye Ọstrelia gbasara ihu igwe kpọpụtara ha ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enweghị mmasị na ha. ebe okpomọkụ. N’oge a na-alụ Agha IIwa nke Abụọ, ọ bụ ha dere aha ụmụ nwaanyị. Site na nke a, mba Amerịkà emeela atụmatụ ịkpọ ha n'usoro ụda olu, n'agbanyeghị na iwebata mkpụrụedemede asụsụ mba ọzọ ọhụrụ mere ka a lọghachi n'aha ụmụ nwanyị.
Tupu afọ 1950, Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe na United States nwere ọrụ maka ikenye ọtụtụ ebili mmiri nke ebe okpomọkụ. Iji maa atụ, a kpọrọ aha ajọ ifufe nke ise nke oge ajọ ifufe nke 1932 Nọmba 5. N'ime afọ ndị sochirinụ ka ejiri mkpụrụedemede ụda olu ndị agha (Able, Baker, Charlie, wdg) kenye aha.
Ka oge na-aga, ná mmalite afọ 1953, e nyere aha oké ifufe nke ebe okpomọkụ. Aha ndị edepụtara n’usoro mkpụrụ akwụkwọ, na-enye oke mmiri ozuzo mbụ nke afọ a na-amalite n’A.
Na 1978, aha ndi nwanyi na ndi nwoke gunyere na aha aha oke ikuku nke North Pacific. Na 1979 ndepụta nke aha Osimiri Atlantic, gụnyere aha nwoke na nwanyị. Taa, mgbe ọgba aghara nke ebe okpomọkụ na-abawanye na oké ifufe nke ifufe na ifufe karịrị 63 km / h (39 mph) na National Hurricane Center (NHC) na-enye ya aha.
Iji chọpụta aha ndị ị ga-eji, mba ndị so na Mtù Na-ahụ Maka Ihu Igwe Worldwa (WMO) na-enyocha ndepụta ahụ mgbe niile, gụnyere aha ndị nkịtị maka ịsụ Bekee, Spanish na-asụ French. Usoro nke aha nwoke na nwanyị na-agbanwe kwa afọ. dịka ọmụmaatụ, na 1995 ndepụta ahụ malitere na Allison yana na 1996 na Arthur.
Ka ọ dị ugbu a, e nwere aha 6 nke aha mmiri mmiri na-ekpo ọkụ, aha 21 maka oké ifufe Atlantic na 24 maka oké ifufe na ugwu ọwụwa anyanwụ Pacific. Na Philippines ọ bụ PAGASA (Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration) dịka nke 2001, ọ na-eji ndepụta anọ nke aha 25. Aha ndị ahụ ga-adị mkpụmkpụ ma dịkwa mfe nghọta, echefula na ha nwere ike imetụta ọtụtụ mba. A na-eji ndepụta ndị a eme ihe kwa afọ (ndepụta e jiri mee ihe na 2011 bụ otu ihe ahụ dị na 2005, belụsọ aha ewepụrụ).
Ọ bụrụ na ejiri aha ndepụta niile, gafere cyclones 21 (24 dị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke Pacific), a na-amalite ịkpọ aha ndị na-esote mkpụrụedemede Greek: alpha, beta, were gabazie. N’ihe banyere Philippines, PAGASA na-eji aha inyeaka mgbe aha ha gafere 25.
Site na ndepụta ndị a, n'oge ụfọdụ mgbe oké ifufe na-ebibi ihe ma kpatara ọtụtụ ọnwụ, a na-ewepụ aha ya. Ngosipụta a nke ịkwanyere ndị ahụ metụtara na-enyekwa aka izere ọgba aghara na ụlọ ọrụ mkpuchi, mgbasa ozi, wdg. Iji maa atụ n’afọ 2005 Katrina ma ọ bụ the Sandy na 2012 na aha ndi ozo dika Andrew, Bob, Camille, David, Dennis, wdg.
Ọ bụrụ na oké mmiri ozuzo na-ekpo ọkụ nke na-esite na Atlantic erute na Pacific, a na-enye ya aha ọhụrụ. N'ihe banyere Typhoon Haiyan, ọ bụ ụlọ ọrụ abụọ dị iche iche nyere aha abụọ ndị ahụ. Typhoon Yolanda bụ nke PAGASA guzobere.
Ozi ndị ọzọ - Tacloban, ajọ ifufe Haiyan ala efu, Ajọ Ifufe Sandy, otu afọ ncheta: ọtụtụ ihe ị ga-eme, ọtụtụ ihe ị ga-amụta, Afọ 2013 ga-abụ nke asaa kachasị ekpo ọkụ kemgbe enwere ndekọ
Ntughari - NOAA
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Ajọ ifufe, gịnị kpatara eji akpọ ha ya?
Okpomoku Uwa: Uzo nke ikpochapu nke anaghi ahuta n'ime afọ 200 na ọdọ mmiri sub-arctic
Oke mbufịt Canarian na-eyi United States egwu